भाई'रल जोडीको कोठामा आज रुवा' बासी ! बाहुनकी छोरीलाई बुहारी भन्न अफ्ठे'रो लाग्छ भन्दै रोइन (भिडियो सहित हेर्नुहोस) - Onlines Time
भाई’रल जोडीको कोठामा आज रुवा’ बासी ! बाहुनकी छोरीलाई बुहारी भन्न अफ्ठे’रो लाग्छ भन्दै रोइन (भिडियो सहित हेर्नुहोस)
भाईरल जोडीको कोठामा आज रुवाबासी ! बाहुनकी छोरीलाई बुहारी भन्न अफ्ठेरो लाग्छ भन्दै रोइन
गोकुल बाँस्कोटा अडियो टेप काण्डमा प्रधानमन्त्री ओली संलग्नता
‘गाली बेइज्जती’ मुद्दाको लिखित जवाफका क्रममा मिश्रले यसपटक मात्रै नभई अघिल्लो कार्यकालमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले अनियमितता गर्न सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदबारे मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गरेको दाबी गरेका छन् । मिश्रमाथि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले ‘गाली बेइज्जती’ गरेको आरोपमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।
तत्कालीन एमाले–माओवादी गठबन्धनको सरकार रहेकामा २०७३ असार–साउनमा माओवादीले कांग्रेससँग गठबन्धन बनाएको थियो । ओली नेतृत्वको सरकार ढल्ने निश्चित भएपछि हतारहतार सुरक्षण विकास समिति गठन गर्नुमा ‘अनियमितता गर्ने उद्देश्य रहेको’ आरोप मिश्रले लिखित जवाफमै लगाएका छन् । ओलीले राजीनामा दिनुभन्दा केही दिनअगाडि २०७३ साउन ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन आदेश जारी गरेको मिश्रको भनाइ छ । त्यसको दुई सातापछि साउन १९ गते प्रधानमन्त्री ओली पदबाट हटेका थिए ।
राजपत्रमा कात्तिक ८ गते सुरक्षण मुद्रण विकास समिति २०७३ गठन आदेश प्रकाशित भएको थियो । ‘सरकार ढल्ने भइसकेपछि हतारहतारमा सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन गर्न आदेश जारी गर्नुको कारण आज आएर जनतासामु छर्लङ्ग भएको छ,’ मिश्रले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘यसबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र हालका प्रधानमन्त्री पनि स्वयं ओली नै भएकाले यसलाई मूर्तरूप दिनमा प्रधानमन्त्रीको पनि संग्लनता स्पष्ट देखिन्छ किनकि प्रधानमन्त्रीको सहमतिबिना कुनै पनि निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट हुन सक्दैन ।’
मिश्रको दाबीअनुसार सम्पूर्ण संयन्त्र निर्माण गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने र निश्चित अवधिपछि नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने भनी स्विटजरल्यान्डको केबीए नोटासिसले २०७३ पुस २२ गते लगानी बोर्डमा निवेदन दर्ता गरेको थियो । त्यतिबेला भने तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए तर त्यतिबेला प्रक्रिया लगानी बोर्डभन्दा अगाडि बढ्न सकेन । नयाँ सरकारले बनेपछि भने सुरक्षण मुद्रण प्रक्रिया फेरि अगाडि बढ्यो । २०७६र७७ सालको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा २ वर्षभित्र सुरक्षित छापाखाना स्थापना गरी राहदानी, नोट, अन्तशुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, लालपुर्जा र सार्वजनिक महत्त्वका कागजात प्रिन्ट गरिने उल्लेख थियो । सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी उपकरण सरकार–सरकार ९जीटूजी० माध्यमबाट खरिद गर्ने भनी सरकारले निर्णय गरेको थियो । सरकारले बैंक नोटबाहेकको संयन्त्र स्थापना गर्न खोजेको मिश्रको दाबी छ । उनले बैंक नोट प्रिन्ट हुने गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना हुनुपर्नेमा भ्रष्टाचार गर्ने नियतले बैंक नोट छाप्ने संयन्त्र समावेश नगरिएको दाबी गरेका छन् ।
सरकारले सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापना भए नेपालीको व्यक्तिगत विवरण बाहिर नजाने दाबी गरेको थियो । पूर्व मन्त्री बाँस्कोटाले पनि त्यही दाबी गर्दै आफूहरूले सफा उद्देश्यसाथ काम गरेको भनी मिश्रमाथि मुद्दा लगाएका थिए तर मिश्रले त्यो कुरा झूटो रहेको दाबी गर्दै नेपालमै डाटा सेन्टर राखे मात्रै विवरण नबाहिरिने उल्लेख गरेका छन् । आफूले बाँस्कोटालाई पहिलोपटक २०७५ भदौ १५ गते भेटेको र त्यस क्रममा यही कुरा सहमत गराउन खोजेको उनको दाबी छ ।
मिश्रको दाबीअनुसार लगानी बोर्डमा प्रस्ताव पेस गरेपछि उनले समेत उक्त कम्पनीको प्रतिनिधिका रूपमा काम गरेनन् अनि सुरक्षित मुद्रणका लागि बुट प्रस्ताव राखेको केबीए नोटासिस पनि बाहिरिएको थियो ।
मिश्रले लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिवालयमा काम गर्ने केही व्यक्तिको पनि नाम जोडेका छन् । उनको दाबीअनुसार प्रधानमन्त्रीका सहायक राजेश बज्राचार्यले अनुरोध गरेपछि मिश्रले तत्कालीन मन्त्री बाँस्कोटालाई भेटेका हुन् । केबीए नोटासिसले सरकारको लगानीबिनै सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापना गर्ने प्रस्ताव लत्याउनु नै सरकारको बदनियत भएको दाबी गरेका छन् ।
लिखित जवाफमा उनले भनेका छन्, ‘सरकारी लगानीबिनै नोटसमेत छाप्न मिल्ने छापाखाना स्थापना गर्न सकिने थाहा हुँदाहुँदै सरकारी रकम नै लगानी गरी छापाखाना किन्ने सरकारको नियत र व्यवहारबाट भ्रष्टाचारतर्फ लक्षित भन्ने स्वतः पुष्टि हुन्छ ।’
अडियो टेप रेकर्डको सिलसिला पनि स्विस कम्पनीको रुचिबाट डिल गर्ने क्रममा अघि बढेको देखिन्छ । २०७५ मंसिर ७ गते स्विस सरकारलाई सरकारले पत्र पठाएको थियो । त्यही क्रममा स्विस राजदूतले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटालाई भेट्न खोजेपछि आफूले समय मिलाउने क्रममा भेटेर अडियो रेकर्ड गरेको मिश्रको दाबी छ । स्विस कम्पनीको प्रस्तावमा कुनै रुचि नदेखाएका सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटालाई जर्मन कम्पनी भेरिडसले भने त्यतिबेला प्रभावमा पारिसकेको मिश्रको दाबी छ । मिश्रको लिखित जवाफअनुसार २०७५ असोज २१ गतेदेखि १० दिन मन्त्री बाँस्कोटासहितको टोलीले जर्मनीलगायत मुलुकको भ्रमण गरेको थियो । टोलीमा मन्त्रीकी श्रीमती र छोराका साथै सचिव महेन्द्र गुरुङ, उनकी पत्नी अनि विकल पौडेललगायत नेपालस्थित भेरिडस कम्पनीका प्रतिनिधि पनि संलग्न थिए । सत्तासँग नजिक भएर काम गरेका सचिव गुरुङ अवकाशपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रमुख बनेका छन् ।
सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापनापछि सरकारले विकल पौडेललाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाएको थियो । सुरुमा गठन आदेश जारी हुँदा स्नातकोत्तर र १० वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति मात्रै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएकामा पछि सरकारले संशोधन गरी सात वर्षको अनुभव र स्नातकलाई शैक्षिक योग्यताको मापदण्ड बनाएको थियो । पौडेलले यसअघि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट ९एमआरपी० छाप्ने ओबर्थरमा प्राविधिक भएर काम गरेका थिए । त्यही काम गर्ने जर्मन एजेन्ट फ्योरियन प्याकुलिन हाल भेरिडस कम्पनीमा काम गर्छन् तर तत्कालीन मन्त्री बाँस्कोटाको झुकाउ पछिल्लो समय फ्रान्सको इन ग्रुपसँग थियो । उक्त समूहले बाँस्कोटा मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि फ्रान्स भ्रमण गराएको थियो ।
आफू अनुकूलको काम गराउन प्रतिस्पर्धा नगरी मन्त्रालयमा सहसचिव, सचिव हुँदै मन्त्रीस्तरीय समितिले प्रस्ताव पारित गरेको भन्दै मिश्रले त्यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पनि पारित भएको दाबी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को समितिमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका साथै तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासमेत थिए । प्रिन्टिङ प्रेस खरिदबारे २०७६ कात्तिक २० गते मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक निर्णय गरेको थियो ।
मिश्रको दाबीअनुसार सरकारले खरिद गर्न लागेको प्रेस जर्मन कम्पनी भेरिडसको आफ्नै उत्पादन होइन । उसले स्विस कम्पनीबाट किनेर फेरि नेपालमा बेच्न खोजेको थियो । मेसिन उत्पादन गर्ने नभई आईटी कम्पनीबाट प्रेस खरिद गर्न लागिएको थियो, जसबाट अरू मन्त्रालयका काममा हस्तक्षेप भएको थियो । त्यसैलाई बल पुर्‍याउन २०७६ भदौ ११ गते अन्तिम चरणमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पासपोर्ट छपाइसम्बन्धी टेन्डर रद्द भएको मिश्रको दाबी छ ।
मिश्रको लिखित जवाफअनुसार जर्मन कम्पनीसँग १ सय ८० मिलियन युरोमा सम्झौता गर्दा करिब ५० मिलियन युरो कमिसन आउने थियो । फ्रान्सको इन ग्रुप कम्पनीको १ सय ८५ मिलियन युरोमा सम्झौता गर्दा त्यो रकमबाट करिब ४५ मिलियन कमिसन बच्ने थियो । यो रकम हालको विनमयदरअनुसार ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हो । ‘जीटुजी प्रक्रियालाई आवरण बनाएर भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको हो,’ मिश्रले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री राजीव गान्धी जोडिएको बफोर्स काण्ड र पोलिमार नोट काण्ड यसका उदाहरण हुन् ।’
मिश्रले लगानी बोर्डमा प्रस्ताव राख्दा मात्रै स्विस कम्पनी केबीए नोटासिसको प्रतिनिधिका रूपमा आफूले काम गरेको भन्दै त्यसपछि भने उक्त कम्पनीसँग कुनै संलग्नता नभएको दाबी गरेका छन् तर उनको लिखित जवाफमा स्विस कम्पनीसँग सम्झौता गरेको भए मुलुकलाई कुनै नोक्सानी नपुग्ने दाबी गरिएको छ । उनका अनुसार स्विस कम्पनीसँग सम्झौता भएको भए सबै संयन्त्र निःशुल्क जडान हुन्थ्यो । त्यसको साटो कम्पनीले हरेक सामानको प्रिन्टमा प्रतियुनिटका दरले मूल्य तोक्थ्यो । उक्त कम्पनीले लगानी उठाएपछि ५ देखि १२ वर्षमा छापाखानाका सबै सामान नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने दाबी गर्दै मिश्रले सरकारले चासो नदेखाएकाले केबीए नोटासिस नेपालबाट बाहिरिएको दाबी गरेका छन् ।
खरिद नै गर्दा पनि स्विस कम्पनीले २ सय मिलियन युरोमा उपलब्ध गराउने छापाखानालाई जर्मनी र फ्रान्सका कम्पनीबाट ३ सय मिलियन हाराहारीमा खरिद गर्न खोजिएको भन्दै मिश्रले ‘त्यसपछि आफूलाई असह्य भएर अडियो रेकर्ड गरेको’ दाबी गरेका छन् । फ्रान्सको इन ग्रुपका नेपाल प्रतिनिधि यति समूहका सोनाम शेर्पा थिए, उनीसँग प्रधानमन्त्री ओलीका समेत नजिकको सम्बन्ध छ । सेटिङ भएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा त्यसबारे उजुरी दिँदासमेत कुनै कारबाही नभएको मिश्रको दाबी छ । अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख नवीन घिमिरेले कार्यकालभर यो प्रकरणमा मुद्दा चलाउने होइन, छानबिन नै टुंगिने गरी तामेलीको निर्णय गराउने प्रयास गरिरहेका थिए ।
आफूले अडियो रेकर्ड सार्वजनिक गरेकाले भ्रष्टाचार रोकिएको तर्क गर्दै मिश्रले त्यस क्रममा तत्कालीन मन्त्री बाँस्कोटासँग आफ्नो कुनै पूर्वाग्रह र रिसइबी नरहेको दाबी गरेका छन् । अडियो टेप आफ्नो भएको स्विकारेर मन्त्री बाँस्कोटाले राजीनामा दिइसकेकाले अडियोको विश्वसनियता पुष्टि हुने मिश्रको दाबी छ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदपछि प्राप्त हुने कमिसनबारे कुराकानी गर्दै गरेको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटाले गत फागुन ८ गते मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । कम्तीमा १५ महिनाअघि आफ्नै कार्यकक्षमै रेकर्ड भएको अडियो सार्वजनिक भएको २४ घण्टाभित्र उनले राजीनामा दिएका थिए ।
अडियो रेकर्डमा मन्त्री बाँस्कोटाले मिश्रसँग कमिसनबापत ५४-५५ करोड मात्रै प्राप्त हुने भएपछि लागतलाई एक अर्ब बढाउन आग्रह गरेको कुराकानी छ । मन्त्रालयअन्तर्गतकै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरले अघि बढाएको प्रक्रिया विवादित बनेपछि संसद्को लेखा समितिले अध्ययन गरेको थियो । त्यसपछि त्यो प्रक्रिया अलपत्र छ । दुवै थरीको मोलमोलाइ ५० करोडबाट सुरु भएर एक अर्ब लागत बढाउने विषयसम्म पुगेको थियो । यस विषयमा अख्तियारमा पनि अनुसन्धान चलिरहेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
Prevकालो नुन अथवा बिरे नुनले खाना स्वादिष्ट बनाउनको साथै अन्य फाइदा, यस्ता छन्
Nextपोखरामा फेरी अर्को ह’ त्या ! चुरोट चोरेको वि षयमा झ’ गडा | ७ महीनाको बच्चा छ मृ तकको